Iimaanka Runta ah Wuxuu ku Siiyaa Farxad Weligeed ah
“KII xaq ahu rumaysad buu ku noolaan doonaa” buu Qoraalka Quduuska ah yiri. (Rooma 1:17) Sidee bay erayadan ballan niyad kicin leh oo adiga kugu saabsan u leeyihiin?
Markuu Ciise hawshii dhulka loo dhiibay dhammeeyay buu Ilaahay samada ugu tagay. Xertiisii oo sii eegaya “ayaa sare loo qaaday isagii, oo daruur baa indhahoodii ka qarisay.” (Falimaha Rasuullada 1:9) Ilaahay Ciise samada wuxuu kaga dhigay Boqor awood leh. Dhowaan Ciise “Wiilka Aadanahu” markuu “ammaantiisa ku yimaado, isaga iyo malaaʼigaha oo dhan, markaasuu carshiga ammaantiisa ku fadhiisan doonaa. Quruumaha oo dhan ayaa hortiisa lagu soo ururin doonaa oo wuxuu u kala sooci doonaa mid mid sida adhijirku u kala sooco idaha iyo riyaha.” (Matayos 25:31, 32) Goormay waxan dhici doonaan?
Wuxuu Kitaabka Quduuska ah inoo sii sheegay inay waqti dhibaatooyin badan oo caalamkoo dhan ku furan iman doonaan. Taasi oo ah calaamadda inuu xukunka Ciise oo ku saabsan quruumaha dhow yahay. Ciise wuu inoo fasiray waxyaalaha ka mid ah calaamaddaas oo wuxuu yiri: “Quruunba quruun bay ku kici doontaa, boqortooyona boqortooyo. Waxaa meelo kala duwan ka dhici doona dhulgariir iyo abaaro iyo cudurro, samadana waxaa laga arki doonaa waxyaalo cabsi leh.”—Luukos 21:7, 10, 11.
Dhibaatooyinka maanta waxay muujiyaan inuu Masiixu mar dhow quruumaha xukumi doono
Maanta si cad baynu u arkaynaa inay kelmedaha Ciise rumoobayaan. Mar dhow Ciise wuu iman doonaa inuu burburiyo kuwa sharka leh. Ugu dambeyn xitaa Shayddaanka waa la burburin doonaa. Dhulkoo dhan wuxuu noqon doonaa janno. Dadkoo dhan iyo xayawaanku waxay ku wada noolaan doonaan nabad. “Yeydu waxay la joogi doontaa baraarka, shabeelkuna wuxuu la jiifsan doonaa waxarta, oo weysha iyo dhasha libaaxa iyo neefka buuranu way wada joogi doonaan, oo waxaa iyaga hor kici doona ilma yar . . . Waxba kuma yeeli doonaan, waxna kuma baabbiʼin doonaan.” (Ishacyaah 11:6, 9) “Oo kan halkaas deggan ma odhan doono, Waan bukaa . . . Oo markaasaa kuwa indhaha laʼ indhahoodu furmi doonaan, oo kuwa dhegaha laʼ dhegahooda furka laga bixin doonaa.” (Ishacyaah 33:24; 35:5) Xitaa dadka dhintay waa la soo nooleyn doonaa. Yehowah “weji kastaba ilmada wuu ka tirtiri doonaa” oo “dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona.” (Ishacyaah 25:8; Muujintii 21:4) Markaas bay dadkoo dhan arki doonaan Ilaahay ulajeeddadiisii hore oo ku saabsanayd dhulka. Runtii, mustaqbal aad u fiican baa ina sugaya!
Dadkee buu Ilaahay ugu abaalgudi doonaa nolosha Jannada ku taalla? Kuwa iimaan run ah haysta!
Ogow inuu iimaanka runta ah ku dhisan yahay aqoonta toosan ee Erayga Ilaahay. Sidaa awgeed sii wad inaad si fiican u sii baratid Ilaahay iyo Ciise.
Dadka iimaanka runta ah haysta waxay weligood ku raaxaysan doonaan Janno!
Iimaanka runta ah waxaa muujiya shuqullo xaq ah. Erayga Ilaahay wuxuu caddeeyay: “Rumaysadkii aan shuqullo lahaynuna meyd [buu] yahay.” (Yacquub 2:26) Markaad shuqulladaas wanaagsan sameysid waxaad noloshaada ka muujinaysaa Ilaahay tayooyinkiisa yaabka leh oo ah awood, caddaalad, xigmad iyo jacayl. Aad ugu dadaal inaad kordhisatid tayooyinkan xagga Ilaahay ka yimid.
Dhisidda iimaanka runta ah waxay keentaa barakooyin badan. Run ahaan waa waddada nolol farxad leh hadda ilaa weligeedba.
Hadda halkee buu Ciise joogaa?
Sidee baan u garanaynaa inuu Ciise mar dhow xukumi doono quruumaha?
Markuu Ciise yimaaddo muxuu qaban doonaa?
Sidee baad u dhisi kartaa iimaankaaga?
Wadaag Wadaag Iimaanka Runta ah Wuxuu ku Siiyaa Farxad Weligeed ah